FARITANY TOLIARA : Tsy maharaka sy tsy ampy ny karatra fanaovana “permis” biômetrika
Efa miseho matetika ny tsy fahampian’ireo karatra, amin’ny fanaovana fahazoan-dalana mitondra fiara amin’ny endriny biômetrika, any Toliara. Maro amin’ireo mpamily fiara no mitaraina manoloana izany. 22 mars 2017
Araka ny feo mandeha heno etsy sy eroa mantsy, dia antony voalohany tsy ahatongavan’ny karatra ireo ny tsy fahafahan’ny orinasa izay miantoka ny fanamboarana ny karatra ny volany teo aloha, izany hoe, efa maro ireo karatra efa lasa nefa tsy tafiditra any amin’ny kitapon’ny orinasa ny vola vidin’ireo karatra efa lafo ireo.
Raha ny ao Toliara dia mbola an-jatony ireo mpamily miandry ny fanavaozana ny karatra, nefa dia amin’izao fotoana anoratanay izao dia tsy misy ny eny amin’ny biraon’ny Faritany, izay hakana ny karatra ary olona efa nandoa vola tamin’ny volana desambra teo dia tsy mbola vita hatramin’izao ny fanavaozana izany.
Nambaran’izy ireo, fa raha mitohy izao, dia tsy ho tratra indray ilay fotoana nomen’ny Mpitondra, izay voalaza fa amin’ny faran’ny volana marsa. Koa tokony tsy hisy izany ny fanapahan-kevitra hentitra, manoloana ny tsy fahavitan’ny mpamily sasany ny karatra noho izao tsy fahampian’ny karatra izao.